Icciitii Masaraa mootummaa keessaa baate! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIcciitii Masaraa mootummaa keessaa baate!
Walgahii dhoksaan mana maree nageenyaaa masaraatti kaleessaa jalqabee hanga ganama kanaa itti fufee ture. Mariin kun ajandaa lama irratti xiyyeeffate.
1. Mormii biyya Keessatti jalqabame kana akkamiin irra aanna?
2. Kufaatii Dippiloomaasii nu quunnamaa jiruu fi gara itti gaafatamummaatti nu geessaa jiru kana jalaa akkamiin oolla? Kan jedhu dha. Walgahii kana kan durse Abiy Ahmed fi Biraanuu Juulaatti akkasumas Itti aanaa komishineera komishinii federaalaa Zalaalam Mangistee, Dammaqaa Mekonnen,Fiqaaduu
Tasammaa dabalatee miseensotni fi hooggantootni waajjiraalee nageenyaa fi paartii PP naannoolee hirmaatanii jiran. Walgahii iccitiin taasifame kana irratti Dammaqaan “yoo gaggeessaan gahumsa dhabe akkasuma taana.” jedhee Abiy Ahmed baayyee aarse. Dammaqaan meeshaa waraanaa naannoo Tigraayii funaaname hunda Amaaraa galchee Abiyyii fi Biraanuudhaaf ajajamuu didee jira. Marii dhoksaan kun
karooraa fi kallattii kaa’a jedhamee eegamus ganama har’aa sa’aatii 4:00 irratti Dammaqaan walgahii dhiisee bahuu irraa kan ka’e bittinnaa’ee jira. Dammaqaan meeshaa Amaaraa keessatti kuufame akka store RIB deebisu gaafatamus “furriikoo naaf haquuf yaaluu irra kee haqadhu, si duran muuxannoo qaba.” jedhee bahee jira. Jeneraalotni dhalootaan Amaaraa tahan Bahir Daritti walgahii dhoksaa godhachuuf akka jiran kan adda baafame yoo tahu Abiy Ahmed yeroo ammaa dhiphina sammuu guddaa keessa galee jira.